ESI GBANWEE NDỌTỊ FAỊLỤ NA WINDOWS 10 - WINDOWS - 2019
Mgbanwe nchịkọta faịlụ na Windows 10
Njikwa nchịkọta dị adị ka os wee nwee ike ịmata ihe ahụ n'ụzọ ziri ezi ma họrọ usoro dị mkpa iji mepee ya. Na Windows 10, ụdị faịlụ ahụ ezoro ezo site na ndabara maka mma nke onye ọrụ.
Hụkwa: Gbanwee ndọtị faịlụ na Windows 7
Gbanwee ndọtị faịlụ na Windows 10
Mgbe onye ọrụ chọrọ ịgbanwe usoro nke ihe a kapịrị ọnụ, ọ bara uru iji ntughari - nzọụkwụ a ga-ahụ hụ nyocha ziri ezi nke ọdịnaya Mana igbanwe ntinye nchịkọta bụ ọrụ dịtụ iche, a pụkwara ime ya aka, karịa kpọmkwem, na-eji ngwaọrụ Windows akọwapụtara ma ọ bụ iji mmemme pụrụ iche. Mana ịmalite, ị ga-arụ ọrụ ngosi nke ụdị faịlụ na usoro.
Meghee "Explorer" wee gaa taabụ "Lee".
Na ngalaba Gosi ma ọ bụ Zoo lelee igbe "Njikwa Aha Njikwa".
Ma ọ bụ i nwere ike iji "Nhọrọ Nhọrọ".
Pịa Nchikota Nweta + R ma detuo uru ndị a:
Ma ọ bụ jide Nweta + S ma tinye "zipu".
Na Njikwa Task meghee "Njikwa" - "Malite ọrụ ọhụrụ".
Ugbu a anyị na-etinye usoro ndị anyị chọrọ.
Na taabụ "Lee" chọta "Zoo ndọtị ..." ma wepu akara ahụ.
Usoro 1: XYplorer
XYplorer bụ otu n'ime ndị njikwa faịlụ na ngwa ngwa. O nwere ngwugwu taabụ dị mma, ntọala ndị na-agbanwe, okpukpu abụọ na ihe ndị ọzọ. A na-akwụ ụgwọ usoro a, ma enwere ikpe ikpe maka ụbọchị 30. A na-akwado asụsụ Russian.
Download XYplorer site na saịtị ọrụ
Gaa usoro ihe omume ahụ ma chọta faịlụ achọrọ.
Pịa ya na bọtịnụ òké aka ma họrọ Kpọgharia aha.
Kọwaa ndọtị ị chọrọ mgbe ị gachara.
I nwekwara ike gbanwee ndọtị nke ọtụtụ faịlụ n'otu oge ahụ.
Họrọ nọmba nke ihe ịchọrọ ma kpọọ menu ihe.
Chọta ihe Kpọgharia aha.
Ugbu a ezipụta aha, tinye ntụpọ, dee ụdị achọrọ ma tinye ya "/ e".
Pịa "OK"iji gosi mgbanwe.
Ị nwere ike inweta ndụmọdụ na ozi zuru ezu site na ịpị akara ngosi gburugburu na leta "m". Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmara nzizi nke renaming, wee pịa "Lee ...". Na kọlụm aka nri ị ga-ahụ mgbanwe ndị a.
Usoro 2: NexusFile
NexusFile nwere ogwe abụọ, ikike ịhazi nlele gị, na-enye ohere zuru ezu iji nyegharịa faịlụ ma nwee ọrụ ndị ọzọ bara uru. A na-ekesa ya n'efu na-akwado ọtụtụ asụsụ, gụnyere Russian.
Download NexusFile site na saịtị ọrụ
Kpọọ menu ihe dị n'ime ihe achọrọ ma pịa Kpọgharia aha.
N'akwụkwọ ahụ raara onwe gị nye ederede ndọtị dị mkpa ma chekwaa.
Na NexusFile, n'adịghị ka XYplorer, ị pụghị ịkọwa ndọtị ọ bụla maka faịlụ niile ahọpụtara n'otu oge, ma ị nwere ike ịkọwa data dị mkpa maka faịlụ ọ bụla iche iche. N'ọnọdụ ụfọdụ, nke a nwere ike ịba uru.
Usoro 3: "Explorer"
Iji ọkọlọtọ "Explorer", ị nwere ike ịgbanwe ụdị ihe ọ bụla achọrọ. Nke a bụ eziokwu mgbe ihe ebudatara na enweghi ndọtị ma ọlị, ma ị maara na ọ ga-abụ, dịka ọmụmaatụ, .FB2 ma ọ bụ .EXE. Otú ọ dị, ọnọdụ ndị dị iche.
Pịa na faịlụ achọrọ ya na bọtịnụ òké aka ya na menu ndị dị na ya pịa Kpọgharia aha.
Mgbe aha nke ihe ahụ kwesịrị ịbụ isi na ụdị mgbatị.
Pịa Tinyeiji chekwaa mgbanwe.
Usoro 4: "Iwu Iwu"
Iji "Line Line" ị nwere ike ịgbanwe ụdị nke ọtụtụ ihe.
Chọta nchekwa achọrọ, jide Mgbanwe na keyboard na nri pịa ya. I nwekwara ike ịga na folda achọrọ, jide Mgbanwe ma kpọọ ebe ederede ebe ọ bụla.
Họrọ ihe "Mepee windo iwu".
Tinye iwu na-esonụ:
* .wav- Nke a bụ usoro a chọrọ ịgbanwe.
* .wma- ndọtị, nke a ga-agbanwe faịlụ niile na usoro .WAV.
Iji mechie pịa Tinye.
Ndị a bụ ụzọ ịgbanwe ụdị faịlụ ahụ. Buru n'uche na n'ọnọdụ ụfọdụ, ị ga-eji ntọghata ahụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ile ọdịnaya dị na nke ziri ezi (maka ozi ndị ọzọ gbasara usoro a, ị nwere ike ịchọpụta na ngalaba pụrụ iche na weebụsaịtị anyị). Ọ dịkwa mkpa ka ị tụlee ndakọrịta nke nkwalite.